Thit Htoo Lwin: 4/17/11 - 4/24/11
16/06/13 - 23/06/13 (134)
09/06/13 - 16/06/13 (287)
02/06/13 - 09/06/13 (258)
26/05/13 - 02/06/13 (296)
19/05/13 - 26/05/13 (215)
13/05/12 - 20/05/12 (139)
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၇-ဧပြီ-၂၀၁၁)
ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစားပေးလုပ်ရန် တိုင်းရင်းသား ပါတီများ တောင်းဆို (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရန်ရှိ(နှိပ်ရန်)
သမ္မတကို အကြံပေးမယ့်သူနဲ့ မေးမြန်းချက်(နှိပ်ရန်)
ပြည်တွင်းပြည်ပအခက်အခဲများ ဖြေရှင်းဖို့ နိုင်ငံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်၏ မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေးမူ မအောင်မြင်သေး(နှိပ်ရန်)
ရက္ခအလင်းတန်း လျှို့ဝှက်စာစောင် ရခိုင်လူငယ်များဖြန့်ဝေ(နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ပေးဖို့ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
အစိုးရတပ်က နေရာရွှေ့ခိုင်းခြင်းကို ကချင်တပ်ဖွဲ့များ လက်မခံ(နှိပ်ရန်)
ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီဖျက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုးနှုန်း အနည်းငယ်မြင့်တက်(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေး ဗြိတိန် ကူညီဆောင်ရွက်မည်(နှိပ်ရန်)
ပဲခူးတိုင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု စတင်(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းမှ မြန်မာဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့မည်မဟုတ်ဟု အမေရိကန်ယူဆ(နှိပ်ရန်)
သမ္မတမိန့်ခွန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီ တောင်းဆို(နှိပ်ရန်)
ကော့မှူး နဲ့ ကွမ်းခြံကုန်း မှာ ရေတံခါးဖွင့်ထားသဖြင့် တောင်သူများအခက်တွေ့(နှိပ်ရန်)
ဒိုက်ဦးတွင် လောင်ကစားဒိုင်းများကို ရဲ ကစောင့်ရှောက်(နှိပ်ရန်)
အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများတရားမ၀င်သော လမ်းကြောင်းများမှ ထွက်ခွာသူများရှိနေ(နှိပ်ရန်)
အပူချိန် မြင့်မားမှုကြောင့် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ရုတ်တရက် အပူရှပ်၍ ဖျားနာခြင်းနှင့် ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်သည့် ဖြစ်ရပ်များ ပိုမိုများပြားလာ(နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းသမားများတွေ့ဆုံမှု ယာယီရပ်ဆိုင်း (နှိပ်ရန်)
တောင်တန်းသာသနာပြု သျှမ်းဆရာတော်၏ ရွှေရတုမွေးနေ့ပွဲ စည်ကား(နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်ပေါက်ဖို့ တရားမျှတသည့် ဥပဒေစိုးမိုးမှုလိုအပ်ဟု SNLD ထောက်ပြ (နှိပ်ရန်)
တာချီလိတ် ဂိမ်းဆိုင်မှိုလိုပေါက် လူငယ်များ အကျင့်စာရိတ္တပျက် ရပ်မိရပ်ဖများစိုးရိမ်(နှိပ်ရန်)
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာရရေး လာဘ်ထိုးမှုများရှိ (နှိပ်ရန်)
သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ပြည်တွင် ဖွင့်မည် (နှိပ်ရန်)
သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ အသုံးချခံရဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
4/27/2011 06:34:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (27 ဧပြီ 2011)
တိဘက် ခေါင်းဆောင်သစ် လော့ဘ်ဆန် ဆန်ဂေး
ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တိုက်ပွဲဆက်(နှိပ်ရန်)
အာဖဂန်ပိုင်းလော့ လက်ချက် NATO တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးသေ(နှိပ်ရန်)
တိဘက် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်သစ် ရွေးချယ်(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မဲပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲပွဲဥပဒေ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ(နှိပ်ရန်)
သီရိလင်္ကာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု ထပ်မံစုံစမ်းရေး ကုလသမဂ္ဂ တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးမည်(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယားကို နိုင်ငံတကာ ပြစ်တင် ရှုံချ(နှိပ်ရန်)
လူတွေ ကယ်ထုတ်ရာ မစ်စရာတာကို ကဒါဖီတပ်တွေ ဒုံးကျည်နဲ့ပစ်(နှိပ်ရန်)
4/27/2011 06:33:00 AM
NewsNow:(Myanmar) 27 April 2011
Murder suspects: Police arresting the three suspects who allegedly beat and slashedacompatriot to death in Cheras Wednesday.
Myanmar beaten to death(Click)
U Zin Linn
Burma’s Health Minister’s dream seems to be unproductive(Click)
Myanmar president enlists confidante of opposition leader Suu Kyi as adviser(နှိပ်ရန်)
Myanmar leader enlists Suu Kyi friend as adviser(Click)
China, Myanmar sign MoU on rail transport project(Click)
Myanmar, India to speed up renovation of Arnanda Pagoda(Click)
Myanmar, India to speed up renovation of pagoda in ancient city (Click)
4/27/2011 06:32:00 AM
NLD Statement No 7/04/11
4/27/2011 05:50:00 AM
NewsNow:(Myanmar) 26 April 2011
Move on for rail, road link with Myanmar(Click)
MYANMAR: Early warning system needed for fishermen (Click)
AFP – Former Burmese soldier turned pro-democracy activist Myo Myint
speaks at the US State Department in Washington, …
Authorities in Yangon havebanned plastic bags, state media said on Tuesday, in an attemptto stop non-degradable wastepolluting Myanmar's main city. -- PHOTO: AP
Myanmar's main city bans plastic bags: State media (Click)
Ex-soldier shines light on hidden Myanmar war(Click)
4/26/2011 11:30:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (26 ဧပြီ 2011)
ဆီးရီးယားမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေထပ် ဖြစ်ပြန်(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယားဆန္ဒပြမှု စစ်တပ် တိုးမြှင့်နှိမ်နင်း(နှိပ်ရန်)
NATO စစ်ဆင်ရေးမှာ အီတလီ ပါဝင်မယ်(နှိပ်ရန်)
ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး ၀န်ကြီးကလင်တန် တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယားစစ်တပ် ပစ်ခတ်လို့ ဆန္ဒပြသူ ၁၈ ဦး သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
4/26/2011 11:08:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၆-ဧပြီ-၂၀၁၁)
လိပ်ပြာသန့်ရင် အာဏာမဲ့သူမှာလည်း စွမ်းအားရှိတယ်လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောဆိုသူ
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ခွဲတမ်းစနစ်သစ်ကြောင့် မှောင်ခို ဓာတ်ဆီ ဈေးတက်(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ အခြေအနေ ဂျပန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကို တင်ပြ(နှိပ်ရန်)
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မုန်တိုင်းများကြောင့် အနည်းဆုံး ၇ ဦးသေဆုံး(နှိပ်ရန်)
သမတသစ် ဦးသိန်းစိန်၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက် မမြင်ရသေး(နှိပ်ရန်)
ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး မြန်မာသံအမတ် တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ထိတွေ့ရေးမူ မအောင်မြင်ကြောင်း အမေရိကန် ဝန်ခံ(နှိပ်ရန်)
လှည်းကူးက ကလေးတယောက် စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်း ခံရ(နှိပ်ရန်)
လယ်တွေ နှစ်ခါပြန် သိမ်းယူ(နှိပ်ရန်)
ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး တိုးမြင့်(နှိပ်ရန်)
ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်) ရာသီဥတု အပူချိန်ကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ရှိ အနီးစခန်းရေတံခွန်၊ ပွဲကောက်ရေတံခွန်၊ ပိတ်ချင်းမြောင်လိုဏ်ဂူ ရေတံခွန်တို့ ရေနည်းပါးလာ(နှိပ်ရန်) ရပ်ကွက်များ အတွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များတွင်ပါ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြိုးများ ရောင်းချခြင်း မပြုရန် သက်ဆိုင်ရာမှ အကြောင်းကြား(နှိပ်ရန်) အကျဉ်းစံ သံဃာ့အရေး သာသနာ့နုဂ္ဂဟ ကြိုးပမ်းသင့် (နှိပ်ရန်) ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီဝေပုံသစ် မကျေနပ်ကြ (နှိပ်ရန်) တောင်သူလယ်သမားကို မြှင့်တင်ပေးရန် ဒေါ်စု ပြော (နှိပ်ရန်) ဝ ပြည်၌ အကောက်ခွန်ဈေးနူန်း လျှော့မပေးသေး လုပ်ငန်းရှင်များအခက်တွေ့ (နှိပ်ရန်) ငလျင်ဒဏ်သင့်ဒေသ လူထုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု အထူးလိုအပ်ဟု - SNLD ပြော(နှိပ်ရန်) နကသ ရဲအရာရှိတစ်ဦး ဓါးခုတ်ခံရ(နှိပ်ရန်) သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ ဖွဲ့(နှိပ်ရန်) ငွေမပေးပဲတောင်ယာခုတ်ပါကဖမ်းဆီးမည်(နှိပ်ရန်) တပ်ရံပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်မဖြစ်မနေ၀ယ်ယူရ(နှိပ်ရန်) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးတနိုင်ငံလုံးချဲ့ထွင်လှုပ်ရှားမည်(နှိပ်ရန်) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြော်က်ရေးလှုပ်ရှားမှု့ကို နှောက်ယှက်(နှိပ်ရန်)
ဆရာအောင်သင်းတို့ စင်္ကာပူတွင် စာပေဟောပြော (နှိပ်ရန်)
တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ နအဖ က အရပ်သားပိုင်ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပိုက်(နှိပ်ရန်)
မိဘမဲ့ကလေးများ ရန်ပုံငွေ IC ရှိုးပွဲ ခွင့်ပြုချက်မရ (နှိပ်ရန်)
အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ကာချုပ် ဦးစီးမည် (နှိပ်ရန်)
သမ္မတ၏ ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖြစ်မည် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာဒုက္ခသည် ပြန်ပို့ရေး အချိန်မတန်သေး(နှိပ်ရန်)
လိပ်ပြာ​သန့်​ရင် အာဏာ​မဲ့​လည်း အားရှိ​တ​ယ်(နှိပ်ရန်)
4/26/2011 11:05:00 AM
NewsNow:(Myanmar) 25 April 2011
Myanmar urged to deal with US, improve rights (Click)
Myanmar urged to engage with US(Click)
Is Myanmar At A Crossroads?(Click) Myanmar president calls for measures in border areas development (Click)
Myanmar union official vows to carry out border development tasks (Click)
Myanmar leader: Government must win minorities' trust (Click)
Myanmar set to ink energy contracts (Click)
16 Myanmar citizens held in city(Click)
Myanmar must win minorities’ trust: Sein (Click)
4/25/2011 11:26:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (25 ဧပြီ 2011)
မင်းသားဝီလျံ နဲ့ ကိတ်မစ်ဒယ်တန် တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအပြည့်အစုံ(နှိပ်ရန်) တာလီဘန်တွေအကျဉ်းထောင်ဖောက်ထွင်း(နှိပ်ရန်) အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ် သွားမယ့် အစီအစဉ်ဖျက်(နှိပ်ရန်) အာဖဂန် ထောင်ဖောက်မှုအတွင်း အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး(နှိပ်ရန်) မီးရှို့သတ်သေတဲ့ တိဘက်ရဟန်းငယ်ကို အာရပ် စတိုင် မတည်ငြိမ်မှု လုပ်သည်ဟု တရုတ်စွပ်စွဲ (နှိပ်ရန်) အရှေ့တီမောကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကူညီမှုများ မအောင်မြင် (နှိပ်ရန်)
4/25/2011 09:46:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၅-ဧပြီ-၂၀၁၁)
သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းခွဲ ပြည်မြို့မှာ ဖွင့်တော့မည်(နှိပ်ရန်)
စစ်သင်တန်းကြောင့် ချင်းလူငယ်များ နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးနေ(နှိပ်ရန်) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပေးစာ NLD ထုတ်ပြန် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့အတွက်NLDတိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်) ဥရောပကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေလာကြည့်(နှိပ်ရန်)
သံလွင်အရှေ့ခြမ်း တိုးချဲ့မြို့နယ်ခွဲလေးပြင်းမုန်တိုင်းတိုက် လူ(၅)ဦးသေ(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ် ကုန်သွယ်ရေး ကောင်စီ ဖျက်သိမ်း(နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေး အစိုးရသစ် တွန့်ဆုတ်နေ(နှိပ်ရန်)
တံခါးပိတ်ခိုင်းစေခံရသူ အလုပ်သမားများ လျော်ကြေးရရေးစတင်စစ်ဆေး(နှိပ်ရန်)
ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စနစ်အသစ်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့ရွှေ တရုတ်အဝယ်များ (နှိပ်ရန်)
ကြံ့ဖွံ့ ယာယီ ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း တာဝန်ယူ (နှိပ်ရန်)
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ သတင်းစာများ ထုတ်ဝေမည် (နှိပ်ရန်)
ကရင် နယ်ခြားစောင့် တပ်ချင်း ပြန်တိုက် (နှိပ်ရန်)
စုပေါင်း တောင်းဆိုချက်များ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံပို့ (နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ် ဌာနဆိုင်ရာများ စနစ်တကျလည်ပတ်ရေး အချိန်ကြာဦးမည် (နှိပ်ရန်)
စွမ်းအားရှင် အမည်သစ်ဖြင့် ပြန်ဖွဲ့မည် (နှိပ်ရန်)
4/25/2011 08:47:00 PM
Yan Win (Taung Da Gar) – Myanmar Hlay
ကုက္ကလံ မြောက်ကိုလှည့်ခါမှရန်ဝင်း (တောင်တံခါး)ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၁
“စည်းသာတဲ့ သောင်မြေတောင်လေ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါလို့ကုက္ကလံ မြောက်ကိုလှည့်ခါမှပြန်ခဲ့မယ် ရွှေညာသူရဲ့”လှေထိုးသား တမ်းချင်း
4/25/2011 07:38:00 PM
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ သို့ အကြံပြုစာ
ကိုလွဏ်းဆွေ ရဲ့ အားလုံးပဲဟောင်းနွမ်းလွန်းလို့ အသစ်ကပြန်စကြစို့ ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး အပိုင်း(၁)(၂)(၃) ကို သေချာဖတ်ကြည့်တော့ ချဲ ဂဏန်းထွက်ပြီးမှ တွက်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ မမှန်မှန်အောင် တွက်ပြနေ သလို ပါပဲ။အင်အယ်လ်ဒီ ဦးဆောင်မှု့ကဏ္ဍ ကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရေးသားနေပုံတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ န၀တ၊ နအဖ ခောတ် တလျှောက် သတင်းစာတွေ မှာ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပုံစံတူဆောင်းပါးတွေရေးသားခဲ့တဲ့ မအူပင်ခြင်ကြာ ၊ ပေါက်စ၊ ငါးမင်းဆွေ စတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ အာဘော်တွေနဲ့ ထပ်တူ ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့ရတယ်။
4/25/2011 08:34:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (24 ဧပြီ 2011)
လစ်ဗျားနိုင်ငံ မီစ်ရာတာမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား ၃ ရက်ဆက် တိုက်ပွဲဖြစ်(နှိပ်ရန်)
4/24/2011 08:03:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၄-ဧပြီ-၂၀၁၁)
စီးပွါးရေး၊ စစ်ရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေး(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီသစ်တွေ တိုးလာ(နှိပ်ရန်)
နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေကနေ အကျိုးအမြတ် ရသူများ(နှိပ်ရန်)
လယ်မြေအသိမ်းခံရမှု အာဏာပိုင်တွေ စစ်ဆေး(နှိပ်ရန်)
ဦးပိုင် မော်တော်ယဉ်လိုင်းကားများ စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်နေကြောင်း စွပ်စွဲချက်တွေ ရှိနေ(နှိပ်ရန်)
လူကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဥပဒေကအုပ်ချုပ်တာဖြစ်ဖို့လို့ဟု တစညပြော(နှိပ်ရန်)
ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ချင်း တိုက်ပွဲဖြစ်(နှိပ်ရန်)
နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
စာသင်ခန်းထဲတွင် ဆာလောင်နေသော ကလေးငယ်များစွာ ရှိနေ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
သင်္ကြန်အပြီး အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ(နှိပ်ရန်)
အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၃၈ ချက်ရှိ(နှိပ်ရန်)
4/24/2011 01:33:00 PM
by Journalist's Hittai on Saturday, April 23, 2011 at 6:12am
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ ဘာ့ကြောင့် ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress က အန္တရာယ်ကြီးမှန်းသိရက်နဲ့ နှာစေးနေကြတာလဲစစ်အစိုးရဖြစ်စေချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့အဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာယူပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress ဟာ တိုင်းပြည်မှာ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမှန်း သိပေမယ့်။ BBC. VOA. RAF. DVB. Irrawaddy. Mizzima သတင်းဌာနတွေဟာ သူတို့အကြောင်း သေချာစုံစမ်းသတင်းရေးသားတာမလုပ်ဘဲ နှာစေးနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ အဲဒီသတင်းဌာနတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတော်တော်များများဟာ နေ၀င်းမောင်တပည့်တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေ၀င်းမောင်ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကျော်ကျော်ကတည်းက သူ့ရဲ့ တပည့်တွေကို သစ်ထူးလွင်
4/24/2011 09:18:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၃-ဧပြီ-၂၀၁၁)
နာရေးကူညီမှုအသင်း ၁ဝ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ(နှိပ်ရန်)
မလေးရှားမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ(နှိပ်ရန်)
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ RNDP ခေါင်းဆောင် ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်တွေ မြန်မာစာ မြန်မာစကား သင်(နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန်ရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ အစိုးရကျောင်း များနှင့်တူ ဇွန်လတွင် ပြန်ဖွင့်မည် (နှိပ်ရန်)
ငွေကြေးအစားထိုး ပစ္စည်းသုံးလျှင် အရေးယူခံရမည် (နှိပ်ရန်)
ဈေးသည်များကို NLD အတိုးမဲ့ ချေးငွေ ထုတ်ချေး (နှိပ်ရန်)
4/23/2011 08:47:00 PM
Stepping into the world of Aung San Suu Kyi
Wednesday, 20 April 2011 18:30 Laila de Champfleury Rangoon (Mizzima) - The Lady is notarevolutionary. The heroine of the Burmese pro-democracy movement sat calmly, hands lightly clasped together on the table, talking to her guests who had come to quizz her about her politics and Burma’s troubled road to democracy.
Aung San Suu Kyi said, surprisingly, that she thinks revolutions are ‘not very romantic’. Aung San Suu Kyi withagroup of Danish students and teachers at the NLD office in Rangoon in early April, 2011. Photo: Laila Felicia Lautrop Pichot de Champfleury
The Lady, as she is known, is the face of the Burma’s democratic revolution trying to kickabrutal and entrenched military out of power in Burma. But as she sits talking to us, violent revolutionary change, like in her father’s day, is not in her vocabulary.
4/23/2011 05:50:00 AM
Big Brother watches, inspects Danish students’ notebooks
Friday, 22 April 2011 07:59 Line Skovlund Larsen (Feature) – The sun was up high in the sky when our group of Danish students and teachers walked into the People’s Park in Rangoon to chat about the many meetings we had had over the previous few days.
We took out our notebooks, sat down inacircle on the grass and started talking and writing, trying to ignore the heat. After meeting Aung San Suu Kyi, the group of Danish students
found themselves being photographed wherever they went, as seen here.
I was traveling withagroup of 11 students and two teachers from my Danish folk high school with our focus on international politics. သစ်ထူးလွင်
4/23/2011 05:25:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၂-၀၄-၂၀၁၁)
လက်တော့ပ်ကို ရထားပေါ်သယ်ရင် တန်ဆာဆောင်ဖို့လို (နှိပ်ရန်)
ကြံ့ဖွံ့က အလောင်းလုမှု ကြုံရဟု ဦးကျော်သူ ပြော (နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်အပေါ် NLD သဘောထား အစစ်အမှန်(နှိပ်ရန်)
Time မဂ္ဂဇင်း သြဇာအကြီးမားဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ် ၁ဝဝ စာရင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖော်ပြ(နှိပ်ရန်)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ မြန်မာအနွယ်ဝင်များ လယ်မြေ အလုခံရ(နှိပ်ရန်)
လူငယ်ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ပါဝင်ဖို့ NLD တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး သမ္မတထံပေးစာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ်ရေးထိုး(နှိပ်ရန်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရဲ့ ဓါတ်ပုံရုံးတွေကဖြုတ်ပြီ(နှိပ်ရန်)
၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေ (နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနှင့် မြန်မာ တချိန်တည်း ရုပ်သံလိုင်းပြတ်တောက်မှုဖြစ် (နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် သစ်မှောင်ခိုသမားများ ဖမ်းဆီး (နှိပ်ရန်)
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းပေါက်ကြားမှု ဝန်ထမ်းများကို စစ်ဆေး (နှိပ်ရန်)
တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ ပြည်ပခရီးသွား လာရောက်နှုန်း မြင့်မားလာ (နှိပ်ရန်)
သုတစွယ်စုံစာပေဆု နာမည်ကြီး စာရေးဆရာများ ရရှိ (နှိပ်ရန်)
လက်မှတ် ၅ဝဝ ကျော်ကို သမ္မတထံ ပို့မည် (နှိပ်ရန်)
ထောက်လှမ်းရေး မျက်လုံးအောက်က နိုင်ငံ (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး)(နှိပ်ရန်)
ဒေါ်စု၏ ကမ္ဘာတွင်းသို့ ခေတ္တ ဝင်ရောက်ခြင်း (ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး)(နှိပ်ရန်)
လမ်းဂိတ်နှင့် နွေစပါးကိစ္စ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ ပယ်ဖျက် (နှိပ်ရန်)
4/22/2011 06:27:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၁-၀၄-၂၀၁၁)
ရွေတိဂုံ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်(နှိပ်ရန်)
တရုတ်ရေကာတာများကြောင့် ကမ္ဘာတလွှားမှာ ဆိုးဝါးသည့် ပဋိပက္ခ္ခဖြစ်ပေါ်(နှိပ်ရန်)
ရှမ်းပြည်နယ် ငလျင်ဒုက္ခသည်များ ရေအခက်အခဲရှိနေဆဲ(နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု တဖွဲ့ချင်းလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း UNFC ပြောဆို(နှိပ်ရန်)
UNFC မှ နုတ်ထွက်သည့်သတင်း မမှန်ကြောင်း SSA မြောက်ပိုင်း ငြင်းဆို(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ကနေဒါ ဖိအားဆက်ပေးမည်(နှိပ်ရန်)
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် မနောရမ္မကျောင်း နှင့် ပညာဒါန သင်တန်းများကိုသာ အားထားနေရ (နှိပ်ရန်)
ဇေယျဘူရီ ဆည် အကြောင်း အခြေအတင်ဆွေးနွေးပွဲ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ထောက်ခံပြောကြား(နှိပ်ရန်)
ရှမ်းတောင်ပိုင်း မြေယာသိမ်းမှု များစွာဖြစ်နေ (နှိပ်ရန်)
အမျိုးသမီးများ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် တားမြစ် (နှိပ်ရန်)
ဝ တိုင်းရင်းသားများ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် တရုတ်ကို မှီခိုနေရ (နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်-တရုတ်၊ ဗမာနှင့်ထိုင်း လေတပ် (ဆောင်းပါး)(နှိပ်ရန်)
4/21/2011 07:13:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၀-၀၄-၂၀၁၁)
၀င်ငွေနည်းမိသားစုတွေအတွက် လျှစ်စစ်မီးခ အခမဲ့ပေးတာကို ကုမ္ပဏီတွေ စိတ်မပါ(နှိပ်ရန်) အစိုးရသစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ် NLD ဝေဖန်(နှိပ်ရန်)
မတရားတဲ့ ထိုင်းအလုပ်ရှင် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ တရားစွဲမည်(နှိပ်ရန်)
တရုတ် ရေကာတာစီမံကိန်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ(နှိပ်ရန်)
အင်တာနက်ဖိနှိပ်မှု ကမ္ဘာမှာ မြန်မာအစိုးရ ဒုတိယ အဆိုးဝါးဆုံး(နှိပ်ရန်)
ရေရှားသည့် ရွာနှစ်ရွာကို NLD လူငယ်များ ရေစုပ်စက် လှူဒါန်း(နှိပ်ရန်)
ကရင်ပြည်နယ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်က လူသစ် စုဆောင်း(နှိပ်ရန်)
သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် အမေ့အိမ်ကျောင်းမှာ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ(နှိပ်ရန်)
အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်ကာ မြန်မာ့အရေး အမေရိကန် အဆင့်မြှင့်ဆောင်ရွက်(နှိပ်ရန်)
မြ၀တီကော့ကရိတ်လမ်းကတွက် ထိုင်း က ဘတ်သန်း၁၀၀၀ ကူညီမည်(နှိပ်ရန်)
ရှမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရှမ်းNLD ကကူညီ(နှိပ်ရန်) မြန်မာကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် လက်မခံလိုဟု အမေရိကန် ပြော (နှိပ်ရန်) နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု သတိရှိရန် တပ်တွင်းညွှန်ကြား (နှိပ်ရန်) အဓမ္မ ပိတ်လှောင် အလုပ်ခိုင်းခံရသူများ လွတ်မြောက် (နှိပ်ရန်)
ကွန်ရက်ဖွဲ့သတင်း စစ်တပ်အငြိမ်းစားများ ဂယက်ရိုက် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် လက်မခံလိုဟု အမေရိကန် ပြော (နှိပ်ရန်)
စစ်တကောင်း အဓိကရုဏ်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၅ ဦးသေဆုံး (နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်ကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြေလည်ဖွယ်မရှိ (နှိပ်ရန်)
ရန်ကုန်သင်္ကြန် ယာဉ်တိုက်မှု ယမန်နှစ်ကထက် များပြား (နှိပ်ရန်)
ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ဝန်ကြီးဟောင်းများ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ (နှိပ်ရန်)
မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်ဟု KIO ပြော (နှိပ်ရန်)
4/21/2011 06:28:00 AM
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်အထိ ကျူးကျော် စော်ကားလာသော မူဆလင်အမျိုးသမီး
ဒီနေ့ (၁၅-၆-၂၀၁၃)၊ (၁၂း၀၀)နာရီခန့်က ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကို မူဆလင်ဝတ်စုံပြည့် ဝတ်ထားသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နှင့် ဘောင်းဘီရှည်အနီနဲ့ အ...
လားရှိုး အဓိကရုဏ်း နောက်ဆုံးရ သတင်း (ဓါတ်ပုံများ)
ယနေ့ 28.5.2013- ညနေ (၄း၅၀)မှာ မူဆလင် ကိုနေဝင်းဆိုသူက ဒေါ်အေးဝင်း(၃၈)နှစ်ကို ဓာတ်ဆီပက်မီးရှို့ ပစ်လိုက်လို့ မြို့လူထုက ကိုနေဝင်းကို ဖမ်းပြီး ရ...
သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရပ်မှန်
စိန်မေရီကာ သီဒြယ် ဘုရားကျောင်း တော်ကြီးသည် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ၏ ၏အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ နံနက် ၈း၃၀နာရီမှ နေ...
ရာဇာမင်း ဓါးမြတိုက်ခံရမှု နောက်ဆုံးရ သတင်း မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ တောင်စွန်းကျေးရွာ၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၅၄/၄) နှင့် (၁၅၄/၅) အကြားတွင် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ ည (၁၀)နာရီ အချိန်ခန့်က ကျိုက္ခ...
မလေးရှားမှာမြန်မာတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့ အဓိက အကြမ်းဖက်သမားတရားခံများ
ဒီမနက် မလေးရှား သတင်းစာမှာပါလာပြီ.. မလေးရှားမှာ အကြမ်းဖက်တဲ့ သူတွေ ကို ဖမ်ဝရမ်းထုတ်လိုက်ပြီ ပုံမှာပါတဲ့ သူတွေကို သတိထားကြပါ။ မြန်မာများ သတ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းက ရဲစခန်းတွေကို နေပြည်တော် ရဲဌာနချုပ်က ဝင်ရောက်စီးနင်း
ဇွန်လ ၁၆ ရက် မနေ့ညက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနဲ့ တမူးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကို နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာ...
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်း၌ ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်၍ နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးအပါအ၀င် လေးဦး သေဆုံး
ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ခွဲခန့်က ရန်ကုန် -နေပြည်တော် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၈၀ ၊၅ဖာလုံတွင် နိုင်ငံခြားသားမောင်းနှင်လာသောမော်တော်ယာဉ်မှာ ၎င်း ရှေ့ရှ...
ခြောက်နှစ်အရွယ်ယောကျာ်းလေး၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှ သန္ဓေသားကို အောင်မြင်စွာခွဲထုတ်
ကမ္ဘာတွင် ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အသက်ခြောက်နှစ် အရွယ်ယောကျာ်းလေး တစ်ဦး၏ ဝမ်းဗိုက် အတွင်းတွင်ရှိသော သန္ဓေ သားကို ရန်ကုန်တွ...
ရွှေတိဂုံစေတီတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပန်းကြဲ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး စေတီဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့ဘက်စောင်းတန်း ရင်ပြင်တော်တွင် ဇွန်လ ၁၄ ရက် နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ...
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ပန်းကျဲ ခဲ့သည့် မခင်မျိုးအား စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံပို့
၁၆.၆.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၇၃၀ အချိန်တွင် ရန်ကုန်အိုလမာ အစ္စလာမ် သာသနာ့ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချူပ်မှ ဦးမောင်မောင်လေး နှင့် မော်လ၀ီ ဟာရာရှစ် တို့ဦးဆောင်ေ...